Okunye | Tianjin Yixin Pipe Izixhobo Co., Ltd.
Ngokubanzi Sebenzisa Of YIXIN oluzenzekelayo Pipe Welding Machine
Izixhobo oluzenzekelayo ukuwelda sisetyenziswa ngokubanzi esisangqa iwelding, ngqo iwelding iwelding, kunye nomoya umbhobho welding.
Umatshini we-YIXIN wokuzenzekelayo awulungelanga kuphela umbhobho kunye ne-tube welding, kodwa kunye ne-flange welding, i-welding e-flat, kunye ne-welding ye-seam. Ayilungelanga kuphela ukuwelda kombhobho womhlaba kunye naphantsi komhlaba, kodwa ikwasetyenziswa ngokubanzi kwindawo ephezulu yokuwelda efana nemibhobho yomoya. Ukongeza, ikwafanelekile ukuwelda iindonga ezahlukeneyo zodonga, zincinci njenge-5mm kwaye zinkulu njenge-100mm zinokufezekisa iwelding egqibeleleyo. Sisixhobo esisebenzisa kakhulu iwelding.
I-HW-ZD-200 isetyenziselwe ukwenza i-Weld 85mm Pipe Pipe ene-100% yokuPasa
Njengemveliso ephezulu ye-YIXIN, i-HW-ZD-200 yayisetyenziselwa ukuwelda imibhobho emikhulu kunye ne-85mm ubukhulu bodonga kwaye yafumana iziphumo ezigqibeleleyo. Yimpumelelo yokugqobhoza iwelding eshinyeneyo ekhaya nakumazwe aphesheya.
NgoJuni 2020, iprojekthi yokulungiswa ngokubanzi yendawo ethile esemazantsi yomlambo yangena kulungiselelo olungxamisekileyo. Ishafti esezantsi yesango layo lokuqhuba elinefayipi yayiyipayipi enkulu enobunzima be-2000mm kunye nobukhulu bodonga lwe-85mm. Iprojekthi ye-welding iye yaba yingxaki enkulu kule projekthi, kwaye kuyacaca ukuba ukusombulula le ngxaki kuyeyona nto iphambili okwangoku.
Emva kohlolo oluninzi, umthengi unomdla omkhulu kwinkampani yethu yombhobho we-HW-ZD-200 kuyo yonke indawo.
Iziko leMigangatho yoMgangatho weMveliso yoMphathiswa Wezamanzi liququzelele intlanganiso ekhethekileyo neengcali ezifanelekileyo ezivela kuzo zonke iinkampani ezinesivumelwano seprojekhthi yokuqhuba ingxoxo enzulu malunga nokuba kungenzeka njani kwendlela yokuwelda yomatshini wokuwelda onendawo yonke, kwaye ekugqibeleni Ndigqibe kwelokuba ndisebenzise izixhobo ze-YIXIN ze-HW-ZD-200 ukwenza uvavanyo lwe-welding kunye nenkqubo yokuqokelelwa kwedatha yokuqokelelwa kwedatha.
Olu vavanyo lwendonga ye-welding yodonga olukhulu lwaba yimpumelelo epheleleyo. Ngaphantsi kweemeko zokusebenza kwamandla aphezulu, i-HW-ZD-200 isebenza kakuhle kwaye kakuhle, ngaphandle kweziphumo ezibi njengokuphazamiseka kobushushu obuphezulu, kunye nongenelelo lomqhubi oluncinci. Emva kovavanyo lwe-welding, phantsi kwengqina lomthengi, samema inkampani yohlolo yomntu wesithathu ukuba iqhube uhlolo lwekhwalithi ye-welding, kwaye yaphumelela ngempumelelo uhlolo lwe-ultrasonic kunye nesigaba sokuhlola esingonakalisiyo. Okokugqibela, umthengi uthenge izixhobo zenkampani yethu ze-HW-ZD-200 njengesixhobo esenzelwe le projekthi.
Le projekthi yasungulwa ngokusesikweni nge-1 ka-Agasti ka-2020, kunye neenkcukacha zedayipi ye-welding yi-DN2000 * 70mm kunye ne-DN1500 * 80mm. Ukuwelda kwagqitywa phakathi ku-Okthobha, kwaye iprojekthi isaqhubeka. Iimvini ezigqityiweyo zivavanyelwa ukufunyanwa kwesiphene. Ukuza kuthi ga ngoku, iziphumo zovavanyo zinezinga lokuphumelela eliphezulu kwaye ziye zamkelwa ngamxhelo mnye ngumnini neqela lokwakha.
Ashinyeneyo Pipe Welding
Welding Pipe Welding